Mbido AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Brandon Williams hoodmụaka Akụkọ Ihe Mere Eziokwu Untold Biography
Anyị Brandon Williams Biography na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, ndị nne na nna, ezinụlọ, enyi nwanyị / nwunye ka ọ bụrụ, Ndụ, Net Worth na Ndụ Nke Onwe.
Na nkenke, anyị na-enye gị akụkọ ihe mere eme nke ndị ọkachamara n'asụsụ Bekee nwere aha njirimara "bran“. Akụkọ ndụ ya malitere site n'oge ọ bụ nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ onye ama ama na egwuregwu ahụ.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ onye na-ekpe ikpe azu onye nwere obi ike, anụ ahụ na n'oge edere, setịpụrụ ịgbapụ Luke Shaw na Young.
Agbanyeghị, ọ bụ naanị aka ole na ole n'ime ndị egwuregwu bọọlụ tụlere ụdị nke Brandon Williams 'Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Brandon Williams nke Childhoodmụaka - Nzụlite Ezinụlọ na Ndụ Mbido:
A mụrụ Brandon Paul Brian Williams na 3 nke ụbọchị Septemba 2000 na nne na nna ya n'obodo Manchester, United Kingdom.
Ndị na-agba ọsọ ụkwụ, sitere na mgbọrọgwụ ezinụlọ White Bekee, amụrụ na mmalite nke narị afọ iri ọhụrụ, afọ (2000) ebe ọgba aghara teknụzụ dịka ọkwa izizi ga - eme- n'ezie emebeghị.
Amụrụ Brandon Williams na afọ 2000, afọ ụwa, n’ezie mgbe ọ kwụsịrị ma amụma amụma niile ka ọ bụ ụgha.
Gwa eziokwu!… Afọ ahụ 2000 mgbe amụrụ Brandon, ọ nweghị Y2K, (na millennium ahụhụ ahụ aha ọjọọ). N’ezie, Ugbo elu dika esi buru n’onu ozo adighi ada n’eluigwe.
Ọbụna ogbunigwe agbapụghị na mberede na nchepụta usoro ụbọchị na kọmputa anaghị eme.
Ọnụnọ nke ihe ndị a na-atụ ụjọ na-atụ ụjọ nyere ndị nne na nna Brandon Williams nnukwu nkasi obi.
dị nnọọ ka Marcus Rashford, Brandon Williams nwere ezinụlọ ya site na nnukwu obodo Manchester. Nke a bụ obodo nwere nnukwu egwuregwu na ihe nketa na nke kachasị mkpa, akpọrọ dị ka otu n'ime ebe kachasị ndụ iji nọrọ na Europe.
Ma ị na-achọ nri abalị, nnukwu mmanya mmanya, ọdịnala 'ezigbo ale'pub, ma ọ bụ ebe ịgba egwu n'abalị ahụ, obodo Manchester (nke dị n'okpuru ebe a) nwere ya niile.
Brandon Williams nwere ezinụlọ ya site na nnukwu obodo Manchester, England.
The Manchester United kpakpando tolitere n'ezinụlọ ezinụlọ dị n'etiti. Brandon si Ndị nne na nna dịka ụmụ amaala Manchester nke na-arụ ọrụ ọ bụla mana ha enweghị agụmakwụkwọ kacha mma.
Ezinụlọ ahụ bi na ụlọ na-enweghị ego na mpaghara nke ọrụ bọọlụ gbadara.
Nkọwa Brandmụaka Brandon Williams - Ọzụzụ na andlọ Ọrụ:
Ị maara… Nwatakịrị nwoke ọ bụla sitere na Manchester site na mmalite nke ndụ ha ga-ahọrọ ma ha bu a EGO OR OGBU NEISBORA (Sky Blue)?.
Brandon Williams- dị ka nwatakịrị ọzọ na-etolite na Manchester zara ajụjụ Red na Sky-Blue. Ebe E Si Nweta Foto: Twitter
Za ajụjụ a dị mkpa n'ihi na ọ baghị uru ma ị nwere mgbọrọgwụ ezinụlọ gị na mpụga obodo.
Ruo na ụkwụ gị dị na Manchester, a na-atụ anya na ị ga-aza azịza ajụjụ a. Ọzọkwa, mgbe ị na-aza ajụjụ a, ị kwesịrị ikpe ekpere ka azịza gị ghara ịpụ apụ, dị ka ịhọrọ klọb na-anọpụ iche dịka; Rochdale, Bolton Wanderers ma ọ bụ Wigan.
Nye Brandon Williams, azịza ya dị mfe- 'Manchester United', klọb ndị ezinụlọ ya niile kwadoro.
Na-egbochi ịbụ onye na-agba bọl na igwu egwuregwu ahụ mgbe ụfọdụ mgbe oge ụlọ akwụkwọ gasịrị, obere Brandon maara na ya nwere ikike iji aha ya bọọlụ. Mgbe ọ dị obere, ọ malitere nrọ nke ịhụ onwe ya na agụmakwụkwọ United.
Iji rụpụta ụzọ ya ruo n’usoro agụmakwụkwọ, ikike aka ekpe dị obere bidoro na-egwu egwuregwu asọmpi na mpaghara nke Manchester. N'oge na-adịghị anya, ndị Man United scouts kpọrọ ya kpọrọ ya ikpe ya na klọb.
Mpako nke ndị nne na nna Brandon Williams na ndị òtù ezinụlọ amaghị oke n'oge ọ gafere ọnwụnwa ma nabata ya na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ United.
Nkọwa Brandmụaka Brandon Williams - Ndụ Mmalite Ndụ:
N'ịghọta ọchịchọ nwa ha nwoke maka ịgba bọl maka ndụ, nne na nna Brandon Williams mere ihe niile ha nwere ike iji kwado ọrụ ya.
Ị maara?… Brandon sonyeere United (agadi 6) n'oge ụlọ ọrụ mkpuchi America AIG kwadoro uwe elu klọb na GOAT- C Ronaldo nọ n'ọkwa ike ya.
Ná mmalite, Brandon maara na ọ chọrọ ihe karịrị naanị ịnwe usoro dị ukwuu na ebumnuche iji gafee ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ asọmpi siri ike.
Ọ ghaghị itinye ọgụgụ isi egwuregwu, ntozu okè, usoro ahụike nke anụ ahụ, yana nke kachasị mkpa, inwe echiche ziri ezi iji tozu oke.
Nke a hụrụ nwata nwoke ahụ ka ọ gafere nke ọma, na-echekwa ụzọ ọ gbagoro na klọb n'okpuru 23-squad.
Brandon Williams Biography - tozọ a ma ama:
Na mbido oge 2017 / 2018, a na-akwalite Brandon na ndị otu Under-23. Madighi anya tupu ya abia ihe omuma n'oru tozuru oke ya na aka ekpe.
Dị ka ụgwọ ọrụ maka nkịta ya, ntozu ya na ntụkwasị obi ya, E nyefere Brandon Williams onye isi ndị isi nke ndị otu nchekwa United n'agbanyeghị na ọ bụ naanị 18- ihe bu ihe oma nye nwa nkita.
Onzọ Brandon Williams nke Na - ewu ewu Akụkọ - Ntozu ya dugara ya ịbụ onye ndu.
Brandon Williams Bio - Na-ewu Onwe Ya Akụkọ:
Na-eji Ohere Ohere Left: na Luke Shaw ịghọ onye nwere ike ibute mmerụ ahụ na Ashley Young ebe ọ bụ na ọ kachasị mma, Brandon hụrụ adịghị ike na ọnọdụ aka ekpe nke United wee malite ịmalite atụmatụ ozugbo iji mejupụta ebe ahụ na-ama jijiji.
Nke mbu, Brandon na 30th nke August 2019 meriri nke oma n'ime ndi ntorobia England, mmepe nke mere ka CV di elu.
Mgbe ahụ, onye na-eto eto nke aka ekpe malitere ịmalite ime atụmatụ iji mee ka onyeisi Ole Gunnar Solskjaer na ndị otu United na nnukwu. N'ihi na Brandon bụ onye ọkpụkpọ obodo a mụrụ ma zụlite na Manchester (dịka Marcus Rashford), enwere ụdị ịhụnanya ọzọ n'oge ahụ ọ bara n'ime ebe ahụ, na-enye ọmarịcha arụmọrụ.
Ka oge 2019 / 2020 nke Manchester United na-aga n'ihu na-emebi, enwere ohere na-abawanye n'ịchọ ihe ọ bụla nke ga-enye olileanya dị ntakịrị na aka ekpe.
Ntoputa nke Brandon Williams ghọrọ olile anya ahụ maka klọb ahụ dịka kpakpando mpaghara ahụ enweghị oge meriri ihe mgbaru ọsọ mbụ nke Premiya megide Sheffield United na 24th nke November, 2019
randon Williams nwetara goolu nke izizi ya nye United na bọọlụ 3-3 nyere Sheffield na ụbọchị iri abụọ na anọ nke ọnwa Nọvemba 24.
Inwe oke ịrị elu a metụlala anya Luke Shaw na Ashley Young na-atụ egwu na onye nkwado ziri ezi maka ọrụ aka ekpe ha abatala.
Ọ bụ naanị oge tupu Brandon kwupụta ọrụ zuru oke na ọrụ ya. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Onye bụ Brandon Williams Girlfriend na nwunye ga-abụ?
Site na ịrị elu ama ya na ụdị egwuregwu, o doro anya na ọtụtụ ndị United fans na-eche echiche ịmata ma Brendon Williams nwere enyi nwanyị ma ọ bụ nwunye.
Ee!… A gaghi agọnahụ eziokwu ahụ nke ya daa jụụ na anya anakọtara tinyere ụdị egwuregwu ya agaghị etinye ya na ndepụta nke ndepụta nwanyị nwere ike ịchọrọ.
Ndị na-egwu egwu echewo ma Brandon Williams nwere enyi nwanyị ma ọ bụ nwunye.
N'oge ederede, ọ dị ka Brandon Williams emeela mgbalị siri ike ịghara ikpughe ozi ọ bụla gbasara enyi nwanyị ya. Agbanyeghị n'oge edere, ọ dị ka ọ nwere ike ịlụ di ma ọ bụ nwunye ma eleghị anya na-achọ enyi nwanyị.
Eeh !! Nke ahụ bụ eziokwu- dị ka a hụrụ na Zara McDermott. Ugbu a, ka anyị gwa gị ntakịrị banyere akụkọ ahụ.
Ikendị nkọlọ maka Zara McDermott mara mma: Tupu mgbe mgbaru ọsọ mbụ nke Brandon na 24th nke November, 2019, ebe nrụọrụ weebụ Britain a ma ama mirror biputere akụkọ banyere ya na-ese onyinyo maka Zara McDermott mara mma nke bụ nwa nwanyị maka nwanyị n'ezie Sam Thompson.
Brandon Williams kwuru na ọ chọrọ ka Zara McDermott bụrụ enyi ya nwanyị.
Na akụkọ, Sam Thompson (Foto eserese dijitalụ nke ekwentị ya na-ese n’elu) boro ebubo na ọ jidere Brandon Williams ka ọ na-achọ ịkpọtụrụ enyi nwanyị ya bụ Zara McDermott site na Instagram.
Maka mara mma Zara, n'agbanyeghị inwe enyi nwoke na Sam, ọ dị ka ọ bụghị mkpụmkpụ nke ndị na-adọrọ adọrọ.
Onye ma?… Zara nwere ike daa ọdịda maka Brandon Williams ma nwee ike ịbụ enyi ya nwanyị (ma ọ bụ ikekwe) na oge.
Brandon Williams Ndụ Nke Onwe:
Ewezuga ihe omume football niile, ịmara Brandon Williams 'Personal Life ga - enyere gị aka ịmatakwu ụdị onye ọ bụ.
Na-amalite, ọ bụ onye dị jụụ, nke dị jụụ ma gbakọtara. Ewezuga bọọlụ, a na-ahụkarị ya n'ebe kwesịrị ekwesị, ọ naghị abanye na nsogbu ma mara ihe dị mkpa nke ibi ndụ obi ụtọ.
Brandon Williams Ndụ nke Onwe gị pụọ na Football.
N'ihe banyere ndụ onwe ya, Brandon nwere usoro ndụ nke ndụ, nke na-eme ka o doo anya na ọ dịghị ihe ọ bụla nwere ohere.
Ọ bụ onye na-etinye mgbe niile na-enweghị oge zuru ezu ịhapụ ohere ka ọ ghara ịla n'iyi mgbe ọ bịara ịkụ aka n'ọnụ ụzọ ya. Bụ onye na-asọ mpi United 'aka ekpe' bụ n'ezie ohere kasịnụ ọ nwetagoro na ndụ ya ugbu a.
Ndụ Brandon Williams Ezinụlọ:
Brandon nwere afọ ojuju banyere nzụlite ya na ịdị elu nke ndị ezin’ụlọ ya (gụnyere ndị ezinaụlọ) gbagoro n’egwuregwu, ọ bụghị naanị n’egwuregwu football.
Ị maara?… A makwaara Williams Family na Manchester maka ihe ha rụzuru na ịkụ ọkpọ maka nwanne nwanne Brandon- Zelfa Barrett onye n'oge ọ na-ede, bụ England Ọkwa Super feather.
Brandon Williams bụ onye mmeri ndị ọkpọ ọkpọ England bụ Zelfa Barrett.
Dịka e kwuru n'elu, ezinụlọ Brandon Williams nwekwara ngwakọta nke agbụrụ Black British nwere mgbọrọgwụ ezinụlọ sitere na Africa.
Eziokwu nke Brandon Williams:
N'oge ederede, Brandon bụ ndị ịgba egwu bọọlụ na-egwuri egwu United, nnukwu klọb na England.
N'ịbụ onye nọ n'elu egwuregwu ya, o doro anya na ọ ga-abụrịrị onye nde ama nde ama. Ugbu a ịmara ụzọ ndụ ya ga-enyere gị aka ịmatakwu ọnọdụ ibi ndụ ya.
Brandon na-ebi ndu a haziri ahazi na Manchester, ndụ na-enweghị mmefu na-enweghị isi. Ọ bụ onye na-ejide mkpa dị mkpa nke na-adịghị efu nnukwu ego.
N'oge ederede, ọ dịghị ihe dịka ụgbọ ala ndị mara mma, nnukwu ụlọ obibi nke ndị na-agba ọsọ na-ebi ndụ na-atọ ụtọ.
Ndụ Brandon Williams. Ọ bụ ihe ngwọta maka ndụ dị oke ọnụ.
Brandon Williams Eziokwu Eziokwu:
Onye na-enweghị egwuregwu na-enweghị isi: Inwe nwanne nwanne nwoke bụ onye ọkpọ pụtara na Brandon bụ ndị na-agba ọsọ nwere ike ịhụ oge ọkụ.
Ee, ọ ga-adị mfe ịnwụ jụụ ya ma nwee ike imeghachi omume megide ndị mmegide chọrọ ịlụ ọgụ na ya. Dika edere n'okpuru, o nweghi onye puru igbanyere nwa nwoke nwoke Manchester di na ya adighi nma maka Maypay ikpo ya oku.
Brandon Williams- Onye na-agbachitere onwe ya. Ebe E Si Nweta Foto: ManchesterEveningNews
Ọ bụ ọdụdụ nwa nke ndị 10 ewu ewu na-aza aha Brandon Williams: Mgbe ịchọọ aha "Brandon Williams" na google, ị nwere ike ị ga-ahụ aha nke ọtụtụ ndị siri.
Dabere na Wikipedia, e nwere 10 ndị a ma ama Brandon Williams na nke anyị bụ nke ọdụdụ n'ime ha. Lelee njirimara ndị ọzọ 9 ọzọ Brandon Williams dị ka Wikipedia.
Brandon Williams bụ ọdụdụ nwa n'etiti mmadụ itoolu ndị ọzọ na-aza aha ahụ.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ akụkọ nwata anyị Brandon Williams gbakwunyere Untold Biography Facts. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.